Sebenzisa Ikhompyutheni ye-Tangram ye-Free Template kwi-PDF
Ikhompyutheni yeTangram kwi-PDF (i-Tangram Worksheet elandelayo)
Sebenzisa iphethini ye-tangram ye-PDF ukunqumla i-tangram kwiphepha eliqinileyo njengempahla yamakhadi.
Iprojekthi enkulu yeTangram
Print Print Tangram Worksheet kwi-PDF
Iimangcwabo Zizolise: Yenza iifom
Sebenzisa umzekelo we-tangram kwi-PDF ukugqiba le mibuzo elandelayo.
1. Hlela iziqwenga ze-tangram usebenzisa ulwahlulo lwakho okanye imigaqo.
2. Beka ezimbini okanye ngaphezulu zeengcingo ze-tangram ukuze zenze ezinye iimo.
3. Beka ezimbini okanye ngaphezulu zeengcingo ze-tangram ukuze zenze imilo ehlanganisiweyo.
4. Sebenzisa zonke iziqwenga ze-tangram ukwenza isikwere. Musa ukujonga iphethini ekhoyo.
5. Se benzisa iziqwenga ezisixhenxe ze-tangram ukwenza iparallelogram.
6. Yenza i-trapezoid ngeziqwenga ezisixhenxe ze-tangram.
7. Sebenzisa ezimbini iingcingo ze-tangram ukwenza unxantathu.
8. Sebenzisa ezintathu iziqwenga ze-tangram ukwenza unxantathu.
9. Sebenzisa ezine iingcingo ze-tangram ukwenza unxantathu.
10. Se benzisa iziqwenga ezinhlanu ze-tangram ukwenza unxantathu.
11. Se benzisa iziqwenga eziyisithupha ze-tangram ukwenza unxantathu.
12. Thatha iinqununu ezincinci ezintlanu ze-tangram uze wenze isikwere. 13. Ukusebenzisa iileta kwiinqununu ze-tangram, qaphela ukuba zingaphi iindlela ozenzayo:
(Qinisekisa ukuba uluhlu zonke iindlela ezenzekayo ukwenza oku ngasentla.)
14. Sebenzisana nomlingane ukuza kunye nemimiselo yamagama okanye amagama anxulumene neetangamanzi njengoko unako.
15. Yenza i-rhombus ngamancinci amancinci amathathu, yenza i-rhombus kunye neengqungqutshane ezinhlanu kwaye wenze i-rhombus nazo zonke iziqwenga ezisixhenxe.
I-Tangram iyimifanekiso yamandulo yaseTshayina eyaziwayo edlalwa rhoqo kwiiklasi zamatriki. I-tangram kulula ukwenza. Inemilo ekhomba epheleleyo. I-tangram inee-triangles ezinkulu ezimbini, unxantathu ophakathi, ezimbini zontathu, iparalgram enye kunye nekwere. KUNYE, ngokuqinisekileyo enye yepuzzles ukubeka iziqwenga ezisixhenxe ndawonye ukuba zenze isikwere esikhulu.
Iimangcwaba ziphela zeendlela ezisetyenziselwa ukwenza izibalo zombini kunye nokuphucula umqondo. Xa kusetyenziswa izixhobo zokusebenzisa izibalo, le ngcinga idla ngokucacileyo ngokucacileyo.
Imisebenzi efana nale ncedisi ukukhuthaza ukuxazulula iingxaki kunye nokucinga ngokucokisekileyo ngelixa lifana nokubonelela ngenjongo yemisebenzi. Abafundi bavame ukukhetha izandla kwiimathematika kunye nemisebenzi yeepencil / iphepha. Phangela ixesha kubalulekile ukuba abafundi benze ukudibanisa, esinye isakhono esibalulekileyo kwimathematika.
Iimangcwaba ziza kunye neziqwenga zeplastiki ezimhlophe, nangona kunjalo, ngokuthatha ipateni nokuyiprinta kwikhadikhadi, abafundi bangawubala umbala nawuphi na umbala abawufunayo. Ukuba ifayili eprintiweyo yenziwe i-laminated, iziqwenga ze-tangram ziya kuhlala ixesha elide.
Iziqwenga zeTangram zingasetyenziselwa ukulinganisa ii-angles, ukuchonga iintlobo zeengxowula, ukuchonga iintlobo zexantathu kunye nendawo yokulinganisa kunye ne- perimeter yeemeko eziphambili / iipolgoni. Yenza abafundi bathabathe isahluko ngasinye baze bathethe ngokubanzi malunga noluhlu njengoko banako. Ngokomzekelo, yeyiphi imbobo? mangaphi amanqaku? zingaphi izandi? yintoni na loo ndawo? yintoni umjikelezo? Ziziphi iimilinganiselo ze-angle? ingumlinganiselo? luyinto encinci?
Unokukhangela i-intanethi ukufumana iintlobo zeepuzzle ezibukeka njengezilwanyana. Zonke ezinokuthi zenziwe kunye neziqwenga ezisixhenxe ze-tangram. Ngamanye amaxesha iziqwenga ze-tangram iipuzzle zibizwa ngokuthi 'tans'. Vumela abafundi benze ingxaki kumnye nomnye, umzekelo 'ukusebenzisa i-A, C kunye noD ukuze wenze ... ".
Ziqhelise ukusebenzisa i-Pythagorean Theorem Ngee-Geometry Worksheets
Iifomathi zokusebenzela i-Perimeter: Iiklasi zeGeometry
Umthetho weeCosines Worksheets kunye neempapasho
I-Geometry ye-Free Course Course
Iphepha lokuSebenza leTrigonometry kwiMisebenzi engafaniyo
IYunivesithi yaseSanta Francis
Lithetha ukuthini igama elithi 'Epithet'?
UJulius Caesar: "Qaphela iNkokeli Eyayenza Iingoma Zemfazwe ..."
Imbali yeGrenade yesandla
Ukusebenzisa okungakumbi 'i-Estar'
Oko Kufuneka Ukwazi Ngezi-Neurotransmitters
Sigaba sesekuhlaleni (i-rhetoric)
Ukuqhuba nokuCwangcisa izinto
Eyona nto ibhetele kwaye iyona embi kakhulu ngesiSpanish
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseWashington
Ngeliphi kunye Nendlela yokufaka i-Filin Air Filter yakho